Global Voices teny Malagasy · 13 Marsa 2019
Tantara tamin'ny 13 Marsa 2019
Amerika Latina13 Marsa 2019
Fetiben'ny Blaogy: Tia ny Aterineto ve ianao?
Asainay ianao hanoratra na handrakitra anaty lahatsary ny taratasim-pitiavana iray ho an'ny aterineto, hisaintsaina mikasika ny toetrany ankehitriny, ary indrindra indrindra, hizara ny eritreritrao sy vaovao momba ny fampiasana, toetra sy fiarovana ny aterineto.
RV Newsletter: Manatevin-daharana hetsika hanasongadinana ny vehivavy ao amin'ny Wikipedia
Mediam-bahoaka13 Marsa 2019
Niverina ny hetsika #VisibleWikiWomen taorian'ny hetsika voalohany nahomby tamin'ny herintaona. Ny tanjony voalohany dia ny hanomezana loharanom-baovao "manasongadina ireo lahatsoratra avy amin'ny vehivavy ao amin'ny Wikipedia izay tsy ahitana sary."
#MeTooSebat (SebatKoaAho): Ny Media Sosialy No Alain'ireo Kirgyzstan Mba Hiadiana Hevitra Mikasika An'ireo “Sekoly Gulen” Miteraka Resabe
Azia Afovoany sy Kaokazy13 Marsa 2019
Anisan'ny mendrika indrindra ao Kyrgyzstan ireo sekoly saingy manana fahavalo matanjaka, anisan'izay i Tiorka, sy ny lazany ho manana tsiambaratelo.
Efa ho tontolo andro no tsy nisy herinaratra ny ankamaroan'ny faritra tao Venezoela .
Fantaro i Sasil Sánchez Chan, mampiatrano ny kaonty Twitter @ActLenguas mandritra ny herinandron'ny 11-17 marsa 2019
Andao isika hamantatra bebe kokoa momba an'i Sasil Sánchez Chan, mampiatrano mitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas mandritra ny herinandron'ny 11-17 marsa 2019 ao amin'ny fanentanana amin'ny fampitam-baovaom-piarahamonina vaovao mifantoka amin'ny fimaroam-piteny antserasera.